Waa maxay sababta rainpoo - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Waa maxay sababta rainpoo
Ka roon ka fudud>
Ku baro hawlgalka 10 daqiiqo gudahood>
Tayada sawirka sare iyo saxda ah>
Soo bandhigida wada shaqaynta>
Adag oo badbaado leh>
Waxaa lagu dhex dari karaa noocyo badan oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn>
Soo saaraha kamarada ugu weyn ee Shiinaha
Waxaa la aasaasay 2015, Rainpootech waxay diiradda saareysay sawir-qaadista 5+ sano. Shirkaddu waxay ururisay tiro badan oo tignoolajiyada asaasiga ah ee dhinacyada indhaha, navigation inertial, sawir-qaadista, iyo habaynta xogta goobta. In ka badan 2000 oo unug ayaa la iibiyaa sannadkii, 10K meherad adduunka oo dhan ah ayaa aaminsan Rainpootech.
Midka ugu horreeya ee soo saara kamarad shan-lens ah oo ku dhex jirta 1000g (D2) ka dibna DG3 (650g), ka dibna DG3mini (350g). Roobabku waxay wali isku dayayaan inay alaabta ka dhigaan kuwo fudud, yaryar, kuwo badan oo la adeegsan karo.
Waxa aan u baahanahay in aan dhaafno had iyo jeer waa NAFTAyada, mana JOOJIN doonno.
Hal kamarad, shan lenses. Isku-dhafkan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sawirro ka soo qaadatid shan aragtiyood oo hal duulimaad ah. Iyo Rainpoo waxay si hal-abuur leh u soo saartay wax badan oo taageeraya software iyo hardware, taas oo aan badbaadin karin oo kaliya wakhtiga duulimaadka UAV, laakiin sidoo kale waxay badbaadinaysaa wakhtiga 3D moodaynta xogta farsamaynta software. .
Fiiri "Accessories" si aad u ogaato sida loo isticmaalo qalabyada si aad u badbaadiso wakhtigaaga >
Naqshad qaabaysan ayaa qof walba u sahlaysa in uu barto sida loo rakibo oo loo isticmaalo kamaradaha. Software-ka caqliga leh wuxuu kuu ogolaanayaa inaad soo dejiso sawirada hal-guji.
Tayada sawirka sare iyo saxnaanta
Lens indhaha oo madax banaan u horumaray. Ku-dhismay Double Gauβ iyo kala firdhisanaan hooseeya oo dheeri ah oo lens aspherical ah, kaas oo kabi kara aber-ka, kordhinta fiiqan, yaraynta kala firdhinta oo si adag u xakamaysa heerka qallooca ka yar 0.4%. Intaa waxaa dheer, Waxaan qaadanay dhererka fogaanta kala duwan waxaanan naqshadeynay qiimaha dhererka fogaanta sayniska ee kamaradda shanta-lens.
Wax badan ka baro tayada sawirka iyo saxnaanta>
Waa maxay sababta isku-dubbaridka shan- lenses ay aad muhiim ugu tahay? Dhammaanteen waan ognahay in inta lagu jiro duullimaadyada aan duuliyaha lahayn, calaamadda kicinta ayaa la siin doonaa shanta lenses ee kamarada indhaha. Aragti ahaan, shanta lenses waa in si isku mid ah loo soo bandhigo, ka dibna xogta POS waa la duubi doonaa isku mar. Laakin xaqiijinta dhabta ah ka dib, waxaan gaadhnay gabagabo: marka ay sii adkaato macluumaadka texture ee goobta, ayaa ka weyn tirada xogta in lensku wuu xallin karaa, cadaadin karaa, oo kaydin karaa, iyo wakhti badan oo ay qaadanayso in la dhammaystiro duubista. Haddii inta u dhaxaysa calaamadaha kicinta ay ka gaaban yihiin wakhtiga loo baahan yahay muraayadda si loo dhamaystiro duubista, kamaradu ma awoodi doonto inay sameyso soo-gaadhista, taas oo keeni doonta "sawir maqan" ee calaamadda PPK.
Baro wax badan oo ku saabsan soo-gaadhista is-dhexgalka >
Qolfoofka ka samaysan magnesium-aluminium alloy waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo muraayadaha muhiimka ah, sababtoo ah kamaradda lafteedu waa mid aad u fudud oo yar, waxay si dhib leh u keeni doontaa culays dheeraad ah duuliyaha aan duuliyaha lahayn. Oo ay sabab u tahay in ay qaab modular (jirka camera, unugga gudbinta iyo unugga kantaroolo waa la kala saaray), way fududahay in la beddelo ama la dayactiro.
Haddi ay tahay multi-rotor UAV, drone baal go'an, ama VTOL, kamaradahayadu waa lagu dhex dari karaa iyaga oo lagu rakibay si waafaqsan codsiyo kala duwan.